गुगल एडवर्ड्स एड्रान्क कसरी काम गर्दछ?
सोमबार, नोभेम्बर 14, 2011 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० क्रिस ब्रोस
हामीले धेरै ग्राहकहरु आफैंमा प्रति क्लिक भुक्तान (पीपीसी) चलाउन धेरै पैसा गुमाए पछि हामी आउँदै गरेको देख्यौं। यो होइन कि तिनीहरूले ध्यान दिएनन् वा खाताहरूलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरेनन्, केवल यो हो कि उनीहरूलाई उनीहरूको नतिजामा कसरी प्रभाव पार्ने र वास्तवमा तिनीहरूलाई सुधार गर्ने बारे थाहा थिएन। अधिकांश व्यक्तिहरू मान्दछन् कि प्रति क्लिक भुक्तान केवल एक बिडिंग युद्ध हो र उनीहरूले यो पनि महसुस गर्दैनन् कि उनीहरूको विज्ञापनको गुणस्तर सुधार गरी तिनीहरू उच्च बोलीदाता भन्दा माथिल्लो तहमा जान सक्छन्। पीपीसी व्यवस्थापनलाई धेरै ध्यान र अनुभवको आवश्यक पर्दछ यदि तपाईं यसलाई वास्तविक रूपमा लिन चाहानुहुन्छ, लागतहरू कम राख्नुहुन्छ, र तपाईंको रूपान्तरण दरहरू माथि सार्नुहुन्छ!
मा मान्छे पल्पमेडिया सँगै यो इन्फोग्राफिक राखिएको छ कि गुगल AdWords को जटिलता, Adrank, र कसरी तपाइँको विज्ञापन उच्च पछाडि बढ्न सक्छ बताउँछ।
टैग: गुगल एड्रान्कgoogle adwordsGoogle +पल्पमेडिया
क्रिस एक पार्टनर हो एभअफेक्ट, मा विशेषज्ञता प्रति क्लिक खाता व्यवस्थापन भुक्तान गर्नुहोस्, SEO परामर्श र वेब विश्लेषण। क्रिससँग १ Fort बर्ष भन्दा बढी इन्टरनेटको अनुभव फर्च्युन 16०० कम्पनीहरुसँग छ र व्यवसाय, उत्पादन र सेवाहरु लाई प्रबर्द्धन गर्न अनलाइन अनुभव निर्देशन र कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञता छ। क्रिसको विशेषताहरु; ग्राहक अनलाइन सेल्फ-सर्विस, सर्च ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ), खोज इञ्जिन मार्केटिंग (एसईएम), ई-वाणिज्य, अनलाइन ग्राहक अधिग्रहण, रूपान्तरण रणनीतिहरू, इन्टरनेट रणनीतिहरूको विकास, अनलाइन आरओआई मापन।
गुगल स्थानहरू र गुगल प्लस पृष्ठहरू व्यवसायका लागि (अबका लागि)
जनवरी 5, 2012 1:01 बजे
कुन डेटा विश्वास% निर्धारित गर्न प्रयोग गरिन्छ?
जनवरी 5, 2012 4:54 बजे
निश्चित छैन DisqueD1... PulpMedia को लागी राम्रो प्रश्न!
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::19। बिहान
मलाई लाग्छ $ .०१ भनेको न्यूनतम रकम हो जुन तपाईंले सही सूत्र प्राप्त गर्नका लागि यो सूत्रमा थप्नु पर्छ।
मार्क्स 24, 2014 मा 9: 24 PM
मैले धेरै PPC कम्पनीहरूसँग कुरा गरेको छु, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन तपाईंले वास्तवमा आफ्नो मार्केटिङ अभियानमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ल्यान्डिङ पृष्ठहरू हो। धेरै कम्पनीहरूले तपाइँलाई वेब डिजाइन, वा केवल Google Adwords, वा केवल पपअपहरू, वा केवल पुन: लक्ष्यीकरण आदि जस्ता 1 एकल चीज बेच्छन्। यो पूर्णतया हास्यास्पद छ किनभने 1 चीजले स्थिर मार्केटिङ अभियानमा फरक पार्न सक्छ, त्यहाँ कुनै एक तत्व छैन। अनलाइन मार्केटिङमा मेक वा ब्रेक एलिमेन्ट हो, तपाईलाई सम्पूर्ण प्याकेज चाहिन्छ, र त्यसपछि त्यहाँबाट सुधार/अप्टिमाइज गर्नुहोस्। मैले PPC मात्र भन्दा बढी काम गर्ने राम्रो एजेन्सी छनोट गरेपछि दुई महिनामा मेरो व्यापार राजस्व 60% भन्दा बढि बढ्यो, तर मेरो ल्यान्डिङ पृष्ठहरू, पुन: लक्ष्यीकरण, ब्यानर विज्ञापनहरू, आदि पनि गरे। वास्तवमा, मैले साइमनको फोन नम्बर यहाँ पाएको छु, तपाईं उहाँसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। केवल उसलाई 302-401-4478 मा कल दिनुहोस्।
सेप्टेम्बर 24, 2015 मा 6: 59 AM
राम्रो लेख... धेरै उपयोगी...